Qorshe maamul rasmi ah loogu dhisayo Hiiraan oo socda iyo ergooyinka oo haatan la xulayo – Radio Daljir
Qorshe maamul rasmi ah loogu dhisayo Hiiraan oo socda iyo ergooyinka oo haatan la xulayo
Oktoobar 16, 2013 5:47 b 0
Beledweyne, October 16, 2013 – Qorshihii ugu balaarnaa ee lagu dhisayo maamul rasmi ah oo uu yeesho gobolka Hiraan ayaa ka socoto gobolka Hiraan, waxaana haatan la xulayaa ergooyinkii qaban qaabin lahaa doorashada maamulka gobolka Hiiraan.
Guddi ka socda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo? waxgarad ka soo jeeda deegaanka ayaa ku howlan sidii loo soo xuli lahaa ergooyinka beelaha gobolka dega u metelaya sidii ay u soo dhisi lahaayeen maamul rasmi ah oo gobolka yeesho.
?Beledweyne waxaa laga soo xulayaa 150 xubnood oo ergo ah, halka degmooyinka kale ee gobolka laga soo xulayo midkiiba 100 ergo ah, waa habka loo qorsheeyey ergada la soo xulayo.? Ayuu yiri Xilibaan Maxamed Cumar Maxamuud oo ka mid ah xubnaha Baarlamanka Soomaaliya oo ka mid ah guddiga qabanqaabada ee shirka.
Xilibaanka oo la hadlay idaacada Daljir ayaa sheegay soo xulista ergooyinka in ay ku egtahay 25 bishaan October ee aynu ku jirno, mudane Maxamed Cumar waxaa uu intaas ku daray in ay gooni-gooni ula kulmayaan dadka deegaanada gobolka Hiiraan oo idil.
DHEGEYSO: Xilibaan Maxamed Cumar oo u waramay Jaamac Cabdiraxmaan oo Daljir ka tirsan
Madaxweyne Faroole oo arrimaha shidaalka iyo doorashooyinka si xasaasi ah uga hadlay (Dhegeyso)
Dowladda Soomaaliya oo sheegtay in ay deegaano ka tirsan Bakool kala wareegtay shabaab (Dhegeyso)